Orinasa birao virtoaly 100% an-tserasera 193 Firenena FiduLink
NY FIVAROTANAO VOAO AO AN-TOKONY 56
NY FIVAVAHANA AN-TOERANAO AN-TANY 193
Mandritra ny 10 taona mahery FIDULINK manohana ny mpanjifany isan'andro, ka miorina amin'izany traikefa sy fahalalana ny filan'ny mpitantana orinasa izany na mpanatanteraka mavitrika. FIDULINK manolotra anao ny serivisy birao virtoaly ho an'ireo orinasa amin'ny firenena 193 ... Adiresy malaza any Paris, Londres, Bruxelles, New York, Mahé, Las Vegas, Dublin ary renivohitra 193 manerantany.
Ny biraonao virtoaly malaza ... Avy amin'ny habakabakao MY OFFICE tadiavo ny serivisy rehetra an'ny FIDULINK ary fitantanana feno ny serivisy nomenao ...
Raiso, fampodiana, famindrana ny mailakao ... ny ivotoerana misy anao dia mijanona eo am-pelatananao isan'andro avy amin'ny finday avo lenta.
NY FIVAROTANAO VOAO IANAO IZAO
HITAN-TENY VIRTUAL TOKO VOANA ANAO
Ivon-toeram-pivarotana FIDU anaoLINK ary ny serivisy tsy mandao anao mihitsy, miaraka aminao dia ahafahanao mijanona ao anatin'ny fifandraisana tonga lafatra miaraka amin'ny foibe birao virtoaly anao.
Ny birao virtoaly FIDULINK dia eo am-pelatananao ny zavatra ilainao rehetra sy ny fandraisana fonosana hafa, ny fandraisana taratasy sy ny paositra, fiverenan'ny mailaka, ny fiverenan'ny parsela, ny fandefasana mailaka, ny valin'ny mailaka, ... Ivotoerana fandraharahana an-tserasera marina ny boaty mailakao izao ao amin'ny smartphone na solo-sainao.
1 2 3 USERS eo amin'ny sehatry ny asa
FIDULINK manome serivisy ho an'ireo orinasa mety hampiasa serivisy birao virtoaly amin'ny kaonty mpanjifa maromaro (avy amin'ny orinasa iray ihany)
Mamorona ny faritra mpanjifanao ankehitriny amin'ny fametrahana ny biraon'ny orinasa virtoaly.